Himalaya Dainik » सुशान्तको खाताबाट कसले निकाल्याे ५० करोड ? भयाे नयाँ खुलासा
बलिउडमा निकै चर्चा कमाएका अभिनेता जाे देह त्याग गरे उनकाे नाम सुशान्त सिंह हाे । उनको आ त्मह त्या प्रकरणमा सिंहकी प्रेमिका रिया चक्रवर्तीलाई प क्राउ गर्ने बिहार प्रहरी मुम्बई गएपछि दुबै राज्यका प्रहरीबीच तनाब चलिरहेको छ।
टाइम्स अफ इण्डियाले सोमबार बिहार प्रहरीका प्रमुख गुप्तेश्वर पाण्डेले सुशान्तको आ त्मह त्या प्रकरणमा पैसाको पाटोमा अनुसन्धान नगरेकोमा मुम्बई प्रहरीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले मुम्बई प्रहरीले अनुसन्धानमा हेलचेक्र्याई गरेको आरोप लगाए।
‘बितेका चार वर्षमा सुशान्त सिंहको बैंक एकाउन्टमा ५० करोड रूपैयाँ जम्मा भएको थियो र आश्चर्यजनकरुपमा ती सबै सबै रकम खाताबाट निकालिएको छ। एक वर्षमा खातामा १७ करोड जम्मा भएकोमस १५ करोड निकालिएको छ’ बिहार प्रहरीका प्रमुख पाण्डेले भने, ‘के यो अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण बुँदा होइन? हामी चुप लाग्नेवाला छैनौं। हामी उनीहरूलाई(मुम्बई प्रहरी) किन यस्ता महत्वपूर्ण कुरालाई दबाउने काम भयो भनेर प्रश्न गर्नेछौं।‘
बिहार प्रहरीले यस्तो आ रोप लगाएपछि मुम्बई प्रहरीका प्रहरी कमिस्नर परमवीर सिंहले आ रोपको मिडियामार्फत स्पष्टिकरण पेस गर्ने प्रयास गरेका छन्। कमिस्नरले घटनामा हालसम्म ५६ जना मानिसहरूको बयान रेकर्ड गरिएको भन्दै आफ्नो प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको बचाउ गरे।
उनले सुशान्तले आ त्मह त्या गरेको अघिल्लो रात सुशान्तको बान्द्रास्थित निवासमा कसैलाई ननिकालिएको पनि दाबी गरेका छन्। सुशान्तले जुन १४ मा आफै निवासमा पासो लगाएर आ त्मह त्या गरेका थिए।
सिंहले आ त्मह त्या गरेपछि बलिउडमा व्यापत परिवारबादले दिएको तना वले सुशान्तले आ त्मह त्या गर्नुपरेको आवाज मुखरित भएको थियो। धेरैजनाले घटनाको सिबिआइ जाँच हुनुपर्ने र सिंहलाई मर्न बाध्य पार्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए।
उजुरीपछि बिहार प्रहरी घ टनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै सुशान्तकी प्रेमिका रियालाई अनुसन्धानका लागि पक्रा उ गर्न र घटनाका बारेमा मुम्बई प्रहरीले जम्मा गरेको प्रमाणका दस्तावेज लिन मुम्बई पुगेको थियो।
बलिउडका यी ५ कलाकारल, जो करियर उचाईमा पुगेका बेला रोजे मृत्युको बाटो